AOL Whitelist - Otu esi enweta Whitelisted na AOL
Na Tọzdee, Septemba 11, 2007 Tuesday, July 15, 2014 Douglas Karr
Ikekwe n'ihi na ọ ka bụ otu n'ime ndị kasị ibu ISP na ọtụtụ finicky banyere ozi ịntanetị, AOL nwere ezigbo ọrụ Postmaster n'ịntanetị. Ekwesịrị m ịkpọtụrụ ha mgbe onye ahịa kwuru na ha nwere nsogbu na email na-enweta adreesị ozi-e AOL. O doro anya, anyị chọpụtara na adreesị IP nke ngwa anyị ka a na-egbochi.
Nke ahụ dịtụtụ egwu, dịka a ga - asị na anyị bụ onye na - eme spam ma ọ bụ ihe ọ bụla… mana anyị abụghị. Ozi ịntanetị anyị niile bụ azụmahịa ma ọ bụ ịkpọ oku. N'ezie, ọ dịghị ozi ịntanetị na-esi na adreesị ndị a apụta. Akpọrọ m ezi enyi na guru mgbapụta, Greg Kraios, o wee mee ka m kwụ ọtọ na kọntaktị maka ndị post post post nke AOL yana Weebụsaịtị AOL Postmaster. Akpọrọ m ha oku ma ha mee ka m mara usoro m ga - eme iji kpochapụ ma banye na aha ndị ọcha.
Achọpụtara m na nnukwu nsogbu anyị bụ na sistemụ anyị na-eziga ozi email AOL na-ezighi ezi yana anyị nwere nkwarụ nyocha DNS. Adịgide DNS bụ ụzọ maka ISP iji nyochaa ngalaba gị na ozi ụlọ ọrụ site na adreesị IP ọ na-abịa. Site na ịgbanyụ ya, anyị dị ka spammer. Site na adreesị ọjọọ zuru oke - AOL kpebiri ile ndị anyị bụ anya. Mgbe ha na-enweghị ike ịchọpụta onye anyị bụ, ha gbochiri anyị. Amara! Enweghị m ike ịsị na m na-ata ha ụta.
Mgbe anyị nwesịrị DNS gbanye, AOL kwụsịrị mgbochi ahụ. Agwara m ndị otu ahịa anyị ma gwa ha ka ha kwụsị ime ngosi na adreesị ozi-e AOL (ha kachasị mfe itinye, ọ bụghị ha?). Mgbe mgbochi a kwụsịrị, a na-ahapụ gị ka itinye akwụkwọ maka ịcha ọcha site na saịtị Postmaster. Etinyerela m opekata mpe oge iri na abụọ - mana ngwa ngwa achọpụtara m na ọbọgwụ gị ga-anọ n'usoro tupu i mee ya:
Anyị nyeere Ntugharị Ntugharị DNS na nke ọ bụla na Adreesị IP nke anyị na-eziga ozi nke.
Anyị ga-edozi adreesị ozi-e nzaghachi maka AOL iji dee anyị mgbe enwere nsogbu email. Anyị ahazi mkparị @. Anyị ka na-arụ ọrụ na ịtọlite ​​isi nkụnye eji isi mee email maka "Njehie-Iji" mana nke a bụ mbido dị ukwuu.
Anyị aghaghị ichere ụbọchị ole na ole mgbe anyị kwụsịrị.
Gị na ngalaba ga-dakọtara na ngalaba na kọntaktị gị na nzaghachi akaghị adreesị email. Ị nwere ike debanye aha adreesị FBL gị na AOL.
Y’oburu n’inwe ngalaba di iche iche, ikwesiri itinye maka nke obula.
Jide n'aka na nyochaa adreesị email ị nyefere. Ikwesiri ịpị njikọ njikọ nkwenye tupu ha arụ ọrụ na arịrịọ whitelist gị.
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ichere maka nzaghachi. Ọ bụrụ n’ịjụghị, ịnwere ike ịkpọ Postmasters ma nye ha id idenye aha ha. Nke a ga-enyere ha aka ile ya ngwa ngwa wee hụ ihe adịghị mma. Njikere ime nke a obere oge!
Ana m atụ anya ụbọchị anyị nwere ike inupụ ozi ịntanetị anyị onye na-enye ọrụ email Sistemụ ka anyị wee ghara ichegbu onwe anyị banyere ya! Ana m eche ka mwepụta gọọmentị nke sistemụ email azụmaahịa ha (nke m nyere aka kọwaa!) Yana maka uto na ụlọ ọrụ anyị. Ngwa ngwa anyị nwere ike iji ọrụ nnyefe ha, ọ ka mma!
AOL nwere ụfọdụ ọmarịcha ọrụ Postmaster, mana ọ ga-akara m mma na anyị agaghị edili isi ọwụwa ahụ niile. Otu ndetu, ma ọ bụrụ na ị na-eche ma m na-eche ha igbochi anyị ma ọ bụ nsogbu ọ na-ewe iji whitelist anyị… ọlị. Ọ na-amasị m ịhụ ụlọ ọrụ na-amụ anya banyere SPAM ma na-elekọta ndị ahịa ha.
O were otutu mgbalị tupu anyị enwee ike ịchọta akụkọ ntaneti maka AOL ka ọ bụrụ onye ọcha, mana ha mere mgbe m gbalịsịrị:
A kwadoro arịrịọ Whitelist gị, yana koodu nkwenye xxxxxxxx-xxxxxx.
Amaghị na ọ bụrụ na egbochi egbochi ozi ịntanetị gị ka ọ bụ? Jide n'aka na ahu nagide ihe Igbe nlekota oru ntinye ịchọta ma dozie nsogbu ndị metụtara ISP.
Tags: 250okAOLaol ojiionye nlekọta postaol onye ọchaemail egbochifblnzaghachi akantinye igbeonye na-ahụ maka ịntanetịispjunk iyospamspam mkpesaspam nzacha
Gịnị bụ mmekọrịta mmekọrịta?